Ny Galaxy Note 8 dia ho zava-misy ary io no angatahinay amin'ny smartphone Samsung vaovao | Vaovao momba ny gadget
Ny Galaxy Note 8 dia ho zava-misy ary io no angatahinay amin'ny smartphone Samsung vaovao
Samsung dia efa nanambara ny olana nitarika azy tsy maintsy nisintona ny Galaxy Note 7. Araka ny efa fantatra, ny bateria no tena meloka tamin'ny fiafaran'ny traikefa nahafantarana ny phablet, izay nantsoina ho iray amin'ireo kintana lehibe amin'ny tsenan'ny telefaona finday ary toa kandidà mazava ho an'ny loka finday tsara indrindra amin'ny taona io. Ity terminal ity dia tantara, fa ny vaovao tsara dia ny orinasa Koreana Tatsimo dia efa nanamafy fa hisy ny Galaxy Note 8.
Amin'izao fotoana izao dia izao no fantatsika, ary mety tsy hahita ity fitaovana vaovao ity isika aorian'ny fahavaratra, fa tsy isalasalana Efa manana zavatra 7 farafahakeliny angatahinay momba ny Samsung Galaxy Note 8 manaraka, ary hasehonay anao amin'ity lahatsoratra ity, antenaina, mahaliana.
1 Tsy mipoaka na mirehitra izany
2 Ataovy fisaka indray ny efijery
3 Hery bebe kokoa, miaraka amin'ny fifehezana hatrany
4 Volana amin'ny famolavolana
5 Fitehirizana bebe kokoa fa tsy kinova 64GB fotsiny
6 Manantena aho fa tsy hanaraka ny lalana natombok'i Apple i Samsung
7 Tsy azo atao; vidiny ambany
Tsy mipoaka na mirehitra izany
Mety ho toa tsy misy dikany izany, Ny zavatra voalohany tokony anontaniantsika ny Galaxy Note 8 dia ny tsy hipoaka na hirehitra hatramin'ny niainany ny Galaxy Note 7 dia nanana mihoatra ny ampy isika. Ny zavatra tsara momba ny olana rehetra nanjo an'i Samsung tato ho ato dia ny hijanonany bebe kokoa amin'ny fanandramana ary ny fahazoana antoka fa tsy manana olana na lesoka amin'ny fananganana ireo finday avo lenta.
Ny ohatra voalohany amin'izany dia ny fanemorana ny fampisehoana ofisialy ny Galaxy S8, eritreretinay fa nipoitra avy amin'ireo olana niaretana ary nahatonga ny fandinihana tanteraka ny lafiny rehetra amin'ity fitaovana vaovao ity. Ny vaovao tsara dia hoe mihoatra ny azo atao fa tsy hahita fitaovana Samsung nipoaka na may intsony isika.
Ataovy fisaka indray ny efijery
Hatramin'ny nandefasan'ny Samsung ny Galaxy S6 tamin'ny kinova roa teny an-tsena, ny iray misy efijery miolaka ary ny iray fisaka tanteraka, dia toa te-hiasa amin'ny famoronana terminal fotsiny izy ireo izay tsy misy efijery mihodina na sisiny fotsiny. Ny Galaxy Note 7 dia navoaka teny an-tsena tamin'ny kinova tokana, miaraka amin'ny efijery miolaka, zavatra tsy naharesy lahatra antsika rehetra ary ity karazana efijery ity dia tsy dia ampiasaina firy ary tsy tian'izy ireo ny rehetra.
Manantena aho fa ny orinasa Koreana Tatsimo dia hamerina handinika ny paikadiny amin'ny Galaxy Note 8 ary mbola hanana kinova misy efijery fisaka indray izahay fa tsy fehin-javatra miolaka fotsiny, mba farafaharatsiny afaka misafidy ilay kinova izay maharesy lahatra antsika indrindra izahay.
Hery bebe kokoa, miaraka amin'ny fifehezana hatrany
Ny iray amin'ireo zavatra nahasarika ny sainay indrindra momba ny Galaxy Note 7 dia ny tsy fahampian'ny herinaratra, raha oharina amin'ireo terminal hafa ao amin'ny fianakaviana, izay, araka ny filazan'izy ireo, dia tena biby. Ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana Galaxy Note dia satro-boninahitra satro-boninahitra, ohatra, tao amin'ny AnTuTu, ho toy ny finday avo lenta mahery indrindra eny an-tsena, saingy ny Note 7 dia lavitra ny manjaka amin'ny fari-pitsipika.
Ao amin'ny Galaxy Note 8 maro no efa sahy miloka fa hipetraka a Mpikirakira Snapdragon 835, izay hotohanan'ny 6GB RAM. Ny zavatra hafahafa dia ity tsy hametraka azy ho terminal matanjaka indrindra eny an-tsena, fa eo amin'ny tampon'ny maro amin'ireo mpifaninana aminy no hisy azy. Samsung, raha te hanome ilay naoty ianao dia mila hery bebe kokoa, na dia eny, fifehezana hatrany azafady.
Volana amin'ny famolavolana
Samsung dia nanavao kely dia kely tamin'ny famolavolana ny Galaxy Note 7, na dia azontsika lazaina aza fa tsy mila fanovana lehibe izany raha oharina amin'ny zavatra hitantsika ohatra tamin'ny sisin'ny Galaxy S7. Na izany aza tarehy Ho an'ny Galaxy Note 8 dia azonay atao ny mangataka amin'ny orinasa Koreana Tatsimo mba hanolana momba ny endrika, ary hanolotra antsika zavatra hafa, zavatra mbola tsy hitantsika.
Mpanamboatra maro, tsy misy lanjany firy amin'ny tsenan'ny telefaona finday, no nahagaga ny famolavolana azy ireo ary nanome azy fiolahana. Manantena isika fa hahagaga antsika Samsung amin'ny fanovana mahaliana sasany, ohatra, S Pen izay nohavaozina tanteraka izay tsy mamela antsika hiasa vaovao fotsiny fa manome fomba vaovao hitahiry na hampiasana azy.
Fitehirizana bebe kokoa fa tsy kinova 64GB fotsiny
Vao tsy ela akory izay dia hitantsika ny nanatanterahan'i Samsung fanoloran-tena mafy hanafoanana ny karatra microSD, ny fitehirizana anatiny ihany no azon'ny mpampiasa ampiasaina. Saingy, tsy ela dia takatr'izy ireo fa tsy hevitra izany ary ohatra ny Galaxy Note 7 dia tonga teny an-tsena miaraka amin'ny fahafaha-manitatra ny fitehirizana, izay napetraka tamin'ny 64GB.
Tokony hangataka amin'ny Galaxy Note 8 isika mba hitazomana ny fahafaha-mampiasa karatra microSD, fa koa ny kinova bebe kokoa mahatratra ny tsena amin'ny resaka tahiry anatiny. Tsy ho be loatra izany raha afaka mahita kinova 128GB na 256GB hafa aza isika, mba hialana amin'ny fiankinan-doha amin'ny karatra microSD foana fa amin'ny fotoana maharitra, miadana ny fiasan'ny terminal.
Manantena aho fa tsy hanaraka ny lalana natombok'i Apple i Samsung
Apple dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy volana vitsivitsy lasa izay ny iPhone 7 ary ny iPhone 7 Plus izay iray amin'ireo fiovana tena ilaina indrindra dia ny fanafoanana ny jack 3.5 mm. Rehefa nandeha ny fotoana dia tsy olana ho an'ny ankamaroan'ny olona izany, saingy tsy ho be loatra ny mpampiasa no afaka hanaiky fa nahafa-po na nahasoa.
Amin'izao fotoana izao ny tsena dia tsy mirona hanaraka ny làlana natombok'i Apple, afa-tsy amin'ny tranga vitsivitsy, ary manantena izahay fa tsy hanaraka ihany koa i Samsung ary tazomy ao amin'ny fantsony ary mazava ho azy ao amin'ny Galaxy Note 8 ny fisian'ny jack headphone nentim-paharazana.
Tsy azo atao; vidiny ambany
Zavatra iray tsy azo tanterahina izay manontany antsika rehetra an'i Samsung dia ny fihenan'ny vidin'ny Galaxy Note 8. Mampalahelo fa resy lahatra aho fa ny sainam-pirenen'ilay orinasa Koreana Tatsimo dia tsy ho tobin'ny toekarena ary ho azon'ny paosy vitsivitsy ihany izany.
Noho ny fangatahana fa tsy hijanona izany ary antenaiko fa ny Galaxy Note 8 vaovao dia mahatratra ny tsena, feno fivoarana ary miaraka amin'ny vidiny hiadiana, ohatra, ny finday avo lenta sinoa tsara indrindra eny an-tsena.
Inona no hanontanianao ny Galaxy Note 8 manaraka izay efa nohamafisin'i Samsung tamin'ny fomba ofisialy fa hamely ny tsena?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny Galaxy Note 8 dia ho zava-misy ary io no angatahinay amin'ny smartphone Samsung vaovao
Acer TravelMate Spin B1 no safidy mety indrindra ho an'ny mpianatra
Tesla dia hanatsara ny fampiharana ho an'ny mpampiasa iOS